Hotely: nidina 59 miliara dolara ny fidiram-bolan'ny orinasa tamin'ny 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Hotely: nidina 59 miliara dolara ny fidiram-bolan'ny orinasa tamin'ny 2021
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fitetezana raharaham-barotra dia miadana miverina hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ny fitsangatsanganana asa dia misy sokajy orinasa, vondrona, governemanta ary sokajy varotra hafa. Ny fidiram-bola amin'ny fitsangatsanganana dia tsy antenaina hahatratra ny ambaratonga mialoha ny areti-mandringana hatramin'ny 2024.
Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia vinavinaina hamarana ny 2021 mihoatra ny $ 59 miliara amin'ny fidiram-bola amin'ny dia.
Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia namoy ny $ 49 miliara dolara tamin'ny fidiram-bolan'ny orinasa tamin'ny taona 2020.
Ny fitsangatsanganana asa no loharanom-bola lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny hotely.
Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia vinavinaina hamarana ny 2021 mihoatra ny $ 59 miliara amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa raha oharina amin'ny 2019, araka ny tatitra vaovao navoaka androany. Tonga izany taorian'ny fahaverezan'ny vola mitentina 49 tapitrisa dolara amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa amin'ny taona 2020.
Ny fivezivezena amin'ny sehatry ny asa no loharanom-bola lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny hotely ary niadana ny niverina hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ny fitsangatsanganana asa dia misy sokajy orinasa, vondrona, governemanta ary sokajy varotra hafa. Ny fidiram-bola amin'ny fitsangatsanganana dia tsy antenaina hahatratra ny ambaratonga mialoha ny areti-mandringana hatramin'ny 2024.
Ny fanadihadiana vaovao dia avy amin'ny fanadihadiana nataon'ny AHLA farany teo, izay nahitana fa ny ankamaroan'ny mpandeha raharaham-barotra dia manafoana, mampihena ary mampihemotra ny dia ao anatin'ny raharaha COVID-19 miakatra.
Ny tsy fahampian'ny dia amin'ny raharaham-barotra sy ny hetsika dia misy akony lehibe amin'ny asa, ary manasongadina ny filàna fanampiana vonjimaika federaly, toy ny Save Hotel Jobs Act.
Ny trano fandraisam-bahiny dia heverina fa hifarana amin'ny 2021 amin'ny asa efa ho 500,000 raha oharina amin'ny 2019. Isaky ny olona 10 miasa mivantana amin'ny trano fandraisam-bahiny iray, ny hotely dia manohana asa 26 fanampiny eo amin'ny fiarahamonina, manomboka amin'ny trano fisakafoanana sy antsinjarany ka hatrany amin'ireo orinasa mpamatsy trano fandraisam-bahiny - midika ho fanampiny 1.3 tapitrisa Tandindomin-doza koa ny asa tohanan'ny trano fandraisam-bahiny.
"Raha toa ny indostria sasany nanomboka nipoitra avy amin'ny areti-mandringana, ity tatitra ity dia fampahatsiahivana fa ny hotely sy ny hotely dia mbola mitolona," hoy i Chip Rogers, filoha sady CEO an'ny Fikambanan'ny hotely sy hotely amerikanina (AHLA).
“Ny dia amin'ny raharaham-barotra dia zava-dehibe amin'ny fivelaran'ny indostria, indrindra amin'ny fararano sy ny ririnina, rehefa manomboka mihena ny dia fialantsasatra. Ny ahiahy COVID-19 mitohy eo amin'ireo mpandeha dia vao mainka hampitombo ireo fanamby ireo. Izany no antony hanapahan'ny Kongresy ny bipartisan Mitsitsia lalàna momba ny asa amin'ny hotely hanampiana ny mpiasa hotely sy ny tompona orinasa kely hiaina amin'ity krizy ity. ”
Na eo aza ny isan'ireo voa mafy indrindra, ny trano fandraisam-bahiny no hany sehatry ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy fialam-boly mbola mahazo fanampiana mivantana. Hotely sy ny mpiasan'izy ireo dia nampiseho faharetana lehibe manoloana ireo fanamby ara-toekarena mbola tsy nisy toa azy, ary mila tohana avy amin'ny kaongresy ny indostria hahazoana fanarenana tanteraka.